Lafiny fiarovana :: Nojerena ny fanomanana ny fandraisana ny Papa Fransoa eny Andohalo • AoRaha
Lafiny fiarovana Nojerena ny fanomanana ny fandraisana ny Papa Fransoa eny Andohalo
Nihaona mivantana nifampiresaka tamin’ny Arsevekan’Antananarivo, ny monsenera Odon Marie Arsène Razanakolona ireo tompon’andraikitra ambony misahana ny fitandroana ny filaminana teny Andohalo, omaly. Nojerena hatramin’ny tao am-piangonana. Tomombana avokoa ny fiomanana. Vonona handray ny Papa Fransoa ny eny an-toerana.
Miantso ireo mpino katolika amin’ireo fiangonana eny amin’ny manodidina an’Ivato sy Tsarasaotra ny Arseveka mba tsy hisalasala fa ho tonga maro hitsena ny Papa anio hariva. “Aoka samy hitondra saina kely avokoa ny rehetra ary hanakopakopaka izany mandritra ny fandalovan’ny Papa. Efa misy ireo toerana voaomana hoan’ny rehetra ka aoka samy hanaraka ny fandaminana isika”, hoy ny Arsevekan’Antananarivo. Nanamafy io fahafahan’ny rehetra mitsena ny Papa io ihany koa ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny jeneraly Rakotonirina Leon Richard.
Misy ny lamina efa maty paika momba ny fitsenana ny Papa Fransoa eny amin’ireo fiangonana katolika ao anatin’ny boriborintany fahaenina ka hatrany amin’ny kaominina Antehiroka, araka ny loharanom-baovao. Na ny toerana hipetrahan’ireo mpino katolika manamorona ny lalam-baovao, miala avy eny Ivato hatreny Tsarasaotra aza, dia efa voapetrapetraka mialoha avokoa. Isan’ireo ny mpivavaka ao amin’ny fiangonana katolika Anosivavaka, Anosisoa, Ambatolampy hatrany Imerinafovoany sy Ivato.
“Miangavy izahay ho an’izay olona tsy manana fahazoan-dalana manokana na ny karatra manokana mba hipetraka any amin’ireo toerana efa voalamina mialoha hisy azy ireo mba tsy hisian’ny olana amin’ny fandaminana”, hoy hatrany ny Monsenera Odon Razanakolona.